အဖြူဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲ။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Ignacio Sala | | ပုံ, သဘောထားတွေ
ယခုခဏ အဖြူဘောင်းဘီမဟုတ်တော့တဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဤအထည်ချုပ်အတွက် ၀ ယ်လိုအားသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်မှာဤအရောင်ဘောင်းဘီတစ်ထည် ၀ ယ်လိုပါကဤအမျိုးအစားကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေသည်။ ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးလိုပါပဲ၊ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီတွေရဲ့ဈေးကမြင့်တက်နေပါတယ်။
အဖြူရောင်သည်ကြားနေအရောင်ဖြစ်သည် အခြားအရောင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်, ဒါပေမယ့်အရောင်ပေါင်းစပ်မှုက darts, jeans / jeans, chinos၊ ကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တဲ့စတိုင်နဲ့အသားအရေအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်မေးခွန်းဘောင်းဘီအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။
အဖြူဘောင်းဘီကိုရှာရင်ရှာတွေ့နိုင်တယ် အဖြူအမျိုးမျိုးအချို့သည်အလွန်အပြာရင့်ရောင်သို့ ဦး တည်နေပြီးအချို့သည်အဖြူရောင်ဖြူရောင်သို့ ဦး တည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ဝယ်လိုလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိနှင့်ပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေချင်သောဘောင်းဘီ၏အရိပ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံများတွင်ဖက်ရှင်ဖြစ်လာသည့်အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်ကျိုးပဲ့သောအရိုးများမှလာလျှင်အလွန်တိကျမှန်ကန်မှုရှိရမည်။
အဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ / ဂျင်းဘောင်းဘီများသည်အမြဲတမ်းအရောင်းရဆုံးဘောင်းဘီဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လုံးဝတ်ဆင်ရန်သင့်အတွက်စိတ်သက်သာရာရစေသည်။ အထူးသဖြင့်နွေရာသီရာသီများတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီဖြင့်ဤဘောင်းဘီကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သောအဖြူရောင်ဘောင်းဘီကိုများသောအားဖြင့်တွေ့ရသည်။ ငါတို့လည်းဂျင်းဘောင်းဘီလိုမျိုးဘယ်တော့မှစတိုင်ကျမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်လူတိုင်းကောင်းကောင်း ၀ တ်ဆင်ချင်ချင်တယ်၊ အဝတ်အစားတချို့ကိုဖက်ရှင်နဲ့ ၀ တ်သင့်တယ်။
ရိုသေလေးစားမှု ခါးပတ်၏အသုံးပြုမှုကို အချို့သောဘောင်းဘီများသည်မှောင်မိုက်သောအညိုရောင်ခါးပတ်နှင့်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ပေါင်းစပ်မှုသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုခါးပတ်နှင့်မစမ်းသပ်ဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တာကတော့ဘောင်းဘီကို ၀ တ်ရုံနဲ့မ ၀ င်ဘဲအဝတ်အစားတွေကိုဘယ်လောက်ပဲတံဆိပ်ကပ်ထားပါစေဝတ်ဆင်ထားတာပါ။
1 ရှပ်အင်္ကျီများ၊ တီရှပ်များ၊ ပိုလိုရှပ်များ၊
ရှပ်အင်္ကျီများ၊ တီရှပ်များ၊ ပိုလိုရှပ်များ၊
အဖြူရောင်ဘောင်းဘီများကိုပေါင်းစပ်သောအခါတွေ့ရသောအကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏အထက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရသည်။ ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအဖြူသည်အနက်ရောင်ဘောင်းဘီကဲ့သို့မည်သည့်အရောင်နီးပါးနှင့်လုံးဝအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ကြားနေအရောင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အတူတူနေချင်ရင် \_ t မည်သည့်အရောင်ဖြင့်မဆိုကျွန်ုပ်ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်တီရှပ်မသုံးနိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျင်းဘောင်းဘီအသစ်များဖြစ်သော chinos ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏အဖြူရောင်ဘောင်းဘီအသစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးရလဒ်ကျေနပ်စရာထက်ပိုသောနှင့်အတူအကောင့်သို့အဓိကအရောင်လေးမျိုးကိုယူသွားမှာပါ။ ငါအနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူနှင့်အညိုအရောင်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့လိမ္မော်ရောင် / ပန်းရောင်အရောင်များထွက်မချန်မထားနိုင်ပေမယ့် နှင့်ဂန္ရေတပ်အပြာ။ အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကအဖြူရောင်ဘောင်းဘီတွေကိုပေါင်းစပ်ချင်ရင်အရေပြားရဲ့အရောင်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အရေပြားမှောင်နေရင်လိမ္မော်ရောင်၊ ပန်းရောင်အရောင်တွေဟာအသားအရောင်ကိုအဖြူရောင်ဘောင်းဘီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပေးပါတယ်။
ကျနော်တို့ Ibiza မှာပါတီတစ်ခုသွားသို့မဟုတ်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်လူကြိုက်များ, Ibizan ပါတီသွားလျှင်မဟုတ်လျှင်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ၏ပေါင်းစပ်, အနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့နိုင်ပါတယ်လျှင်မ ကျနော်တို့ကအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပိတ်ချောဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူပေါင်းစပ် ငါတို့နေသည့်နှစ်၏လအရတူညီသောအရောင်ရှိသည်။
ယင်းကြောင့် အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်အတူအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ကြောင်းအဝတ်အမျိုးအစား၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏသွားသောနေရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အရေးကြီးသည့်မင်္ဂလာပွဲသို့မဟုတ်အခမ်းအနားသို့တစ်ညအိပ်ရန်သွားခြင်းသည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့တက်ရောက်သည့်အခါစာမရေးသော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးသောအရာမှာအဝတ်အစားများလွန်းခြင်း၊ အဝတ်အစားများလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီမပါဘဲရှည်သောလက်ရှည်ရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံဆွဲပုံစံမပါဘဲရိုးရှင်းတဲ့ရှပ်အင်္ကျီများသည်စင်းသို့မဟုတ်ရင်ပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါင်လိုက်လိုင်းများကပုံကိုပုံဖော်ပေးသည်ဆိုစေကာမူဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သည်ဆိုပါကအနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဖြူရောင်ဘောင်းဘီကိုဝတ်ဆင်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာပါတီပွဲလုပ်ရန်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ပိုလိုရှပ်သို့မဟုတ်ကော်လာရှပ်များသုံးနိုင်သည် ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရောင်များအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရာသီဥတုမကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်ပင်းမရှိသောဆွယ်တာအင်္ကျီကိုသုံးနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်ပါကအင်္ကျီလက်များကိုကောက်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ Ibizan ပါတီကိုမသွားဘူးဆိုရင်အဝတ်အစားတွေဟာအဖြူရောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ဘောင်းဘီတွေကိုပေါင်းစပ်တာကိုရှောင်ရမယ်။ တူညီတဲ့အရောင်၏ဖိနပ်နှင့်အတူတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိနပ်သည်ဘောင်းဘီကိုတိုးချဲ့ထားသကဲ့သို့ထင်ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိနပ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရောင်များသည်ဘောင်းဘီ၏အပေါ်ပိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်မှောင်မိုက်သောအရောင်များဖြစ်သည်။ လိမ္မော်ရောင် / ပန်းရောင်အရောင်များထွက်ထွက်ခွာသူတို့အရေပြားသေံနှင့်မတူကြဘူးကြောင့်, အထက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ရေတပ်အပြာသို့မဟုတ်အညိုရောင်အရောင်များအတွက်ရေကြောင်း, သူတို့သည်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖိနပ်ဖြစ်သည်အမြဲတမ်းခြေအိတ်မပါဘဲ။ ငါတို့မှာအညိုရောင်လှေစီးဖိနပ်ရှိရင်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ရေတပ်အပြာရောင်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အပြာရောင်ရေကြောင်းဖိနပ်ရှိပါကအညိုရောင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အပေါ်ပိုင်းအပေါ်တွင် မူတည်၍ မကောင်းသောမီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။
အဖြူဘောင်းဘီနှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်သည့်နောက်စီးဖိနပ်အမျိုးအစားမှာဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ် ၀ တ်စုံများဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်ဇာနှင့်အတူရေတပ်အပြာ Sneaker တစ် ဦး ထက်ပိုသောနုပျိုနှင့်ပေါ့ပေါ့မတ်မတ်သည်။ Flip-flops များသည်မည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆိုဤဘောင်းဘီအမျိုးအစားနှင့်လုံးဝပေါင်းစပ်ရန်လုံးဝတားမြစ်ထားသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနက်ရောင်ဖိနပ်များသာရှိပါက၎င်းတို့သည်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်တောက်ပသောအရောင်များမဟုတ်သရွေ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအခမ်းအနားကဲ့သို့သောလောကဝတ်တစ်ခုလိုအပ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ အနက်နှင့်အညိုရောင်အရောင်များသည်ဤအမျိုးအစားတွင်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအထက်ပိုင်းတွင်ဥပမာ - ဥပမာမဲကဲ့သို့သောအရောင်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ရေတပ်အပြာ၊ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ရှပ်အင်္ကျီ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » သဘောထားတွေ » အဖြူဘောင်းဘီကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲ။
သို့မဟုတ်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကို ... ဖြစ်ပါတယ်။
ငါနှစ်သစ်တွင် ၀ တ်ဆင်ရန် ၀ ယ်ခဲ့သည်။
တူညီတဲ့အရောင်နှင့်ဇာနှင့်အတူအချို့သောအဖြူ Sneaker ရှပ်အင်္ကျီ k
ဟင် Adrian နေကောင်းလား နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီကောင်းသည်။ နှစ်သစ်ကူးတွင်နိုင်ငံများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများသည်အဖြူရောင် ၀ တ်ဆင်သည်။ သင့်တွင်ခြေညှပ်ဖိနပ် (သို့) ခြေနင်းများရှိပါက၎င်းတို့သည်ဤဘောင်းဘီပုံစံနှင့်အဆင်ပြေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခြေချောင်းများကိုလေထဲတွင်မဝံ့ဝံ့ပါက၊ အဖြူရောင်ဖိနပ်သို့မဟုတ်သင်အပေါ်ဝတ်ထားသည့်ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီတွင်ရှိသည့်ခြားနားသောအရောင်ကိုရှာဖွေပါ။ ပိုကောင်းတဲ့စတိုင်ပေးဖို့နွေရာသီဖိနပ်အချို့ကိုရှာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၌အဖြူရောင်ဘောင်းဘီများရှိသည်။ Adrian သည်နှစ်သစ်တွင်သူတို့ကိုဝတ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တွင် sneaker အဖြူရှိသည်။ သို့သော်မည်သည့်အပေါ်ဝတ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ လက်တိုတိုသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်နှင့်အဘယ်သို့အရောင်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!!
ဟူးလူစီယာနို ကြည့်ရတာခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းနွေးထွေးတဲ့ရာသီဥတုကနေကြည့်ရတာမင်းရှပ်အင်္ကျီ၊ ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ အရောင်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရောင်သည်မဆိုအဖြူနှင့်ပေါင်းစပ်။ တရားဝင်အသုံးပြုသောအရောင်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အနီရောင်၊ ပန်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အပြာနင့်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်ရွေးလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယင်းသည်သင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအနက်ရောင်နဲ့အများဆုံးရဲရင့်, အဖြူနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ကောင်းတယ် ငါ၌အဖြူရောင်စနီကာများ၊ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီများရှိသည်။ ငါအီတလီတွင်ကမ္ပည်းစာများပါသောရှပ်အင်္ကျီနှစ်မျိုးကိုရွေးသည်။ တစ်ခုမှာလျှပ်စစ်ပြာရောင်ဖြစ်ပြီးမီးခိုးရောင်အခြားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာ၊ အကြံပေးပါ ???
ကောင်းတယ် ငါမွေးနေ့အတွက်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီ ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားမိသည်။ ၎င်းနှင့်ပေါင်းစပ်ချင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ခြစ်ထားသောပန်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်။ တိုသောလက်တိုနှင့်ခြေထောက်ပေါ်တွင်အဖြူရောင်စနီကာများတပ်လိုသည်။ ပေါင်းစပ်မှုကောင်းသလား
FERNANDO CAMARILLO R ဟုသူကပြောသည်
အပြာရောင်လိုင်းပါသည့်ရှပ်အင်္ကျီ၊ အပြာရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အနက်ရောင်ဖိနပ်ပါ ၀ င်သည့်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီ ၀ တ်ချင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာခြေအိတ်များ၏အရောင်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်
FERNANDO CAMARILLO R. ကိုပြန်ပြောပါ
ဟိုင်း Fer၊ နေကောင်းလား သင်အမှန်တကယ်သင်သည်အလွန်ကောင်းသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိပြီးအစည်းအဝေးအတွက်ထိုအဝတ်အစားကိုသမ္မာသတိရှိရှိဝတ်ထားပါလိမ့်မည်။ ငါအဖြူရောင်အတွက်အနက်ရောင်ဖိနပ်ကိုပြောင်းလိမ့်မယ်၊ မင်းကပိုကောင်းတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်။ သင်၌မရှိလျှင်၊ အနက်ရောင်ဖိနပ်နှင့်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီများကိုအသုံးပြုသောခြေအိတ်များသည်အနက်ရောင်ဖြစ်သင့်သည်၊ သို့သော်ဘောင်းဘီများသည်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ခြေအိတ်များ၏အနက်ရောင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သူတို့ကတဆင့်ပြသလျှင်, အဖြူအဘို့အသွားပါ။
ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ထိုအခါသင်ရွေးချယ်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။ HombresconEstilo.com ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ
mauro carrera ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်တွင်သူငယ်ချင်း ၁၅ ဦး ရှိပြီးဖိနပ်ဖြူပါသည့်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်ရွှေရောင်ပုံနှိပ်ထားသောအနက်ရောင်တီရှပ်ကို ၀ တ်ဆင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်သည်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်သင့်သည်။ ဒါမှမဟုတ်တီရှပ်လား နှင့်အဘယ်သို့ရှပ်အင်္ကျီအရောင်?
mauro carrera သို့ပြန်သွားရန်
ဟိုင်း၊ ငါ့မှာဂျင်းဘောင်းဘီအဖြူရှိတယ်၊ ငါဒါကိုစင်းဒါဂိတ်ရှပ်နဲ့ပေါင်းချင်တယ်။ ညမှာအပြင်ထွက်ဖို့ ဘယ်ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ဖိနပ်ကိုသင်အကြံပြုမလဲ
helloaa …။ ငါအဖြူ chiripa ဂျင်းဘောင်းဘီရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပန်းရောင်စနီကာတစ်စုံနဲ့ပေါင်းချင်တယ်။ အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ပေါ်လာမှာကောင်းတယ်။
အဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီသည် (OUT) မကျတော့ဘဲ
နီကိုးလပ်စ်ဘယ်လိုနေလဲငါဒီအကြောင်းပြန်ပြောပြမယ်။ ရှည်ရှည်လက်ရှည်ပန်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီပါသောရှပ်အင်္ကျီအဖြူ jeas zara ၀ ယ်ဖို့တောင်းတာ။ သူတို့ကငါသိုင်းကြိုးအနားမှာရှူးဖိနပ်အချို့ထားဖို့အကြံပြုတယ်။ သင်ဤပေါင်းစပ်မှုအဆင်ပြေသည်သို့မဟုတ်သင်အကြံပြုကြဘူးငါ့ကိုပြောပြပါ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ အဖြူဘောင်းဘီများသည်အထူးသဖြင့်သင်အရပ်ရှည်လျှင်၊ ငါပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုလျှပ်စစ်အပြာရောင် Venca ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပေါင်းစပ်သော်လည်းညအချိန်တွင်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အပြာရင့်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ကျွန်ုပ် ပို၍ ကြိုက်သည်။
ငါဝတ်ဆင်ရန်အနက်ရောင်အစင်းပါသည့်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်ဟုတစ်ယောက်ယောက်ကပြောနိုင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်မသိပါ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွမ်းကျင်စွာဝေမျှနိုင်ခြင်းကကောင်းပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဆင်မပြေမှုများသင့်အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ .. အဖြူရောင်ဘောင်းဘီကို ၀ ယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်တီရှပ်နှင့်ပေါင်းစပ်ချင်ပါသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည် V လည်ပင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဘောင်းဘီအဖြူအတွက်ဖိနပ်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တင်းနစ်ဖိနပ်များကိုသာဝတ်ဆင်သည်။ စနီကာလိုမျိုး၊ ဘယ်တင်းနစ်အရောင် (သို့) ငါ့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေးချင်လဲ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ မေးခွန်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အခန်းတစ်ခန်း၌မင်္ဂလာဆောင်နေသော်လည်းဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ရန်မနှစ်သက်ပါ။ လူများသည်ကြော့အားကစားဖြင့်သာသွားကြပါတော့မည်။ အတိုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာအဖြူရောင်ဂျင်း (levis) - အနီရောင်ကုလားအုတ်ရနံ့တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အ ၀ တ်အထည်များနှင့်တူညီသောအရောင်အသွေးနှင့်ပစ္စည်းမျိုးစုံဖြစ်သောSuède Belt shoes ဖိနပ်နှင့်ဖိနပ်သည်ရွေးချယ်မှုကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်းဖိနပ်၏ကုလားအုတ်အရောင်နှင့်ခါးပတ်နှင့်အတူဖြည့်စွက် ဦး ထုပ်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ငါကရှပ်အင်္ကျီတွေနဲ့ ၀ တ်ချင်တယ်၊ မင်းဘယ်အရောင်တွေကိုသင်အကြံပြုသလဲ။
ဟိုင်းသောမတ်စ်၊ နေကောင်းလား ကောင်းပြီ, အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်စနီနာများရှိခြင်း, ပေါင်းစပ်စူပါလွယ်ကူသည်။ သင်ပန်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ချင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်; လက်ဖက်ရည်၊ လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အနက်ရောင်မဟုတ်သည့်ရှပ်အင်္ကျီကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာမင်းပေးချင်တဲ့ပုံစံ၊ သင်တက်ရောက်မယ့်အဖြစ်အပျက်နဲ့သင့်ရဲ့စရိုက်အပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။ သို့သော်သတိပြုရမည်မှာအဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်စနီကာများရှိခြင်းသည်သင်၏ရှပ်အင်္ကျီ၏အရောင်သည်မည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါသင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီနှင့်သင်မည်သို့ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်အဖြူရောင်အင်္ကျီများရှိပြီး၎င်းသည်အနီရောင် BOOTS များနှင့်အဖြူရောင်ဆွယ်တာအင်္ကျီများဖြင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ကျွန်ုပ်မသိပါကဤ BN သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက၊ ကြိုးတချပ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေ၊
ဟယ်လိုနေကောင်းလား?? လူတွေ၊ ငါ၌ဂျင်းဘောင်းဘီအဖြူနှင့်အနီရောင်အချို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပေါင်းစပ်ချင်သော်လည်းအရောင်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အခြားအရာတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည်ခါးပတ်ကိုအသုံးပြုသည်မဟုတ်သည်ကိုမသိပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီအတွင်းမှာလားအပြင်ဘက်ရှိရှပ်အင်္ကျီလားစတိုင်ကျလှတဲ့ယောက်ျားလေးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်သည်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
ဟိုင်း Joaquin !!! သင်၏မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍၊ ရှပ်အင်္ကျီ (သို့) တီရှပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ မြေအရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် (သို့) အပြာရင့်ရောင်များမှပုံစံတစ်ခုကိုလည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ခါးပတ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏ဖိနပ်နှင့်သို့မဟုတ်သင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အ ၀ တ်အထည်နှင့်ကိုက်ညီသောအဖြူရောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုရှိသင့်သည်။ ရှပ်အင်္ကျီ (သို့) ဆွယ်တာအင်္ကျီကို ၀ တ်ထားရင်ဘောင်းဘီအပြင်ဘက်မှာ ၀ တ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကမင်းအမြဲတမ်း ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ သင်တက်ရောက်နေတဲ့ပွဲပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
ငါကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ် !!! အမျိုးသားများအားစတိုင်လ်ဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
မင်္ဂလာပါ .. အဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့နှစ်သစ်ကူးဝတ်ဆင်တော့မယ် အဖြူရောင် sneaker များ၊ လက်တိုတိုအင်္ကျီ V-polo ရှပ်အင်္ကျီ၊ ပန်းရောင် plaid ရှပ်အင်္ကျီ (အဖြူရောင်နာရီ၊ အဖြူရောင်နာရီ၊ နေကာမျက်မှန်နှင့်အနက်ရောင်ကြိုးတစ်ချောင်းနှင့်အတူထွန်းလင်းတောက်ပနေသောအဖြူရောင်အင်္ကျီ) ။ အကြံမပြုပါ ... ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခြင်း (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်)၊ ပေါင်းစပ်မှုများနှင့်စတိုင်များကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေပြီးသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီ၊ ယခုမေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်ဝတ်စားဆင်ယင်လိုခြင်း၊ ဒီခရစ္စမတ်ရက်စွဲများ၊ ငါဟာဒေါင်လိုက်နှင်းရည်အစင်းများပါသောရှပ်အင်္ကျီအဖြူရောင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘောင်းဘီအမည်းရောင်သို့မဟုတ်မုန်ညင်းသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ အနက်ရောင်ဖိနပ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ နှစ်သစ်ကူးအတွက်ငါအဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်စွန့်စားချင်သည်။ ယခင်လက်များလိုရှပ်အင်္ကျီရှည်၊ အဖြူသို့မဟုတ်အနက်ရောင်လားကျွန်ုပ်မဆုံးဖြတ်ရသေးသောဖိနပ်သည်အဆင်ပြေမည်လား !!! !!! =
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်ထားသောပေါင်းစပ်မှုမှန်မမှန်သိလိုသည်။ အချို့သောအဖြူရောင်ဖိနပ်များ (၀ တ်စားဆင်ယင်) ၁ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီ ၁ ခုနှင့်အနက်ရောင်ပိုလိုရှပ်နှင့်ပန်းရောင်အရောင်ဆိုးများ။ = habanera ကြေးဝါတီးဝိုင်းမှယောက်ျားလေးများ ၀ တ်ဆင်သည်ကဲ့သို့ ... သို့သော်အဝတ်အထည်များကိုထင်ရှားစေရန်အရောင်ဆိုးဆေးများကိုအများအားဖြင့်အဖြူပိုလိုရှပ်အင်္ကျီများဖြင့်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောကြောင့်အဆင်ပြေမည်မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်းကျွန်ုပ်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။ ဘောင်းဘီ, ဒါပေမယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဘောင်းဘီဖိနပ်ကဲ့သို့အဖြူဖြစ်ကြသည်။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ ???? သို့မဟုတ်ပိုလီယို၏အရောင်သည်အဝါရောင်ဖြစ်စေနိုင်သလား? ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပါ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မွေးနေ့ (၁၅) နှစ်ပြည့်ပြီးအဖြူရောင်စနီကာများ၊ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီများ၊ ပန်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီများ ၀ တ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌အနက်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ထည်ရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်သူတို့ကငါ့ကိုအဘယျသို့အကြံပြုမလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ငါအဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ရှည်လျားတဲ့လက်ရှည်အပြာရောင်စင်းရှပ်အင်္ကျီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်အစင်းပါတဲ့အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီတွေနဲ့သုံးတာအပြင်ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာမှန်ရဲ့လား။ ငါရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဆွယ်တာအင်္ကျီနှင့်အတူအဘယျဖိနပ်မျိုးကိုဝတ်ဆင်သင့်ကြောင်းကိုလည်းငါမေးလေ့ရှိ၏, ငါများသောအားဖြင့်က beige ဖိနပ်များနှင့်အတူတူပင်အရောင်တူညီသောအရောင်သိုင်းကြိုး, ဟုတ်မှန်ပါသလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အဖြူရောင်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောဘောင်းဘီကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်ဖိနပ်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်အရောင်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲဖိနပ်၏ပုံသဏ္,ာန်၊ ခြေချောင်းဖိနပ်လား ၎င်းသည် XV နှစ်၏ပါတီတစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပြီး Elegant ကိုကြည့်ချင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ…!!!!!! (:
မင်္ဂလာပါ၊ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဘောင်းဘီအဖြူ၊ အနက်ရောင်တီရှပ်နှင့်စနီကာများရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဆံပင်ပုံစံကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သနည်း။ တိပ်ခွေနဲ့ဘယ်အရောင်သုံးလို့ရမလဲ။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာကိုချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုရှိပြီးအဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီများ၊ အဖြူရောင်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်လိုပြီး၎င်းနှင့်မည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ငါဟာအနက်ရောင်တီရှပ်ဒါမှမဟုတ်အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ ပန်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ဖို့စဉ်းစားမိသည်။
မင်္ဂလာပါ Facundo၊ မင်းထိပ်မှာရှပ်အင်္ကျီဝတ်ချင်ရင်၊ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနဲ့အဖြူရောင်ဖိနပ်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်သုံးတဲ့ရှပ်အင်္ကျီဒါမှမဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီအရောင်ဟာမင်းရဲ့အသားအရေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်။ အဖြူရောင်၊ မှောင်မိုက်စသည်တို့ကျွန်ုပ်အထူးသဖြင့် 3/4 ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ၎င်းသည် Fmm ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Alexis-olivares77@hotmail.com , အောင်မြင်မှုများ (Y)
မင်္ဂလာပါ၊ 3/4 ရှပ်အင်္ကျီကိုအဖြူရောင်၊ အောက်ခြေ flannel တစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြဖို့ကျွန်တော်တစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ flanel ကိုဘယ်လိုအရောင်သုံးရမလဲ။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ မင်းအဖြူရောင်ဘောင်းဘီတိုနဲ့အနက်ရောင်ရှူးဖိနပ်ပါတဲ့ဘောင်းဘီအဖြူကိုမြင်ရလားသိချင်ပါတယ်။ ကလပ်အသင်းကိုသွားဖို့ကူညီပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့အကူအညီကြောင့်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ဂျင်းဘောင်းဘီအဖြူနှင့်အနီရောင်များပါသောအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနီရောင်စနီကာအချို့ကိုအဖြူရောင်၊
ငါအင်္ကျီမပါဘဲအနက်ရောင်ဘောင်းဘီများ၊ အဖြူရောင်တင်းနစ်စီးဖိနပ်များနှင့်စနီနာများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကိုရီးယားသို့မဟုတ်အဖြူရောင်ကိုအသုံးပြုပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ချိုသောအရာသည် ၂၄ ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာလတွင်မည်သို့ကူညီမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ; ကျွန်ုပ်သည် (၁၂) နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်ပြီးအနက်ရောင်သားရေဖိနပ်များ၊ အဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီများနှင့်အဖြူရောင်လိုင်းများဖြင့်ရင်ပြင်များဖွဲ့စည်းထားသောရှပ်အင်္ကျီကိုပေါင်းစပ်ချင်သည်။ ကြည့်ကောင်းမှာလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဘောင်းဘီအဖြူနှင့်အစိမ်းနုရောင် V-neck ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီများရှိပြီးအဖြူရောင်လိုင်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်လှပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ရန်အလွန်အမင်းဖြစ်သော်လည်းမည်သို့သောဖိနပ်များဝတ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ဟေ့၊ ငါဂျင်းဘောင်းဘီအဖြူနဲ့ကျပန်းပေါ့ပါးတဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ခုရှိပေမယ့်မင်းရဲ့ကမ်းခြေဒါမှမဟုတ်တီရှပ်အောက်မှာမဝတ်ချင်ဘူး ... ငါဖိနပ်အဖြူရောင်တင်းနစ်ဖိနပ်အကြောင်းစဉ်းစားခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဘောင်းဘီအဖြူ၊ အနက်ရောင်ခါးပတ်များပါသည့်ဖိနပ်ဖြူပါရှိသည်။ မည်သည့်အပေါ်၌ ၀ တ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အတိုရှပ်အတိုသို့မဟုတ်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ၊ မည်သည့်အရောင်များ၊ ကျွန်ုပ်မနက်ဖြန်အတွက်မလိုချင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်မှာဖိနပ်ဖြူနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီအဖြူရောင်ရှိသည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီအဘို့အဘယ်သို့အရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
အဖြူရောင်ဘောင်းဘီတစ်ထည်ရှိတယ်။ မင်းထဲကတစ်ယောက်ကအဖြူရောင်ဖိနပ်တွေလို၊ မင်းကဘယ်ရှပ်အင်္ကျီဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင့်တော်မယ်ဆိုတာငါသိချင်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပထမ ဦး စွာဘောင်းဘီကိုလျှော်။ အဖြူရောင်ဖြစ်ရန်နှင့်ရှပ်အင်္ကျီသည်အနီရောင်ဖြစ်နေနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်၌အလယ်တန်း၊ အပြာ၊ အဖြူရောင်ရှိဂျင်းဘောင်းဘီတင်းကျပ်စွာရှိပြီး၊ အရောင်တူညီသည့်ဒင်းနစ်ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အရောင်တူသောဂျင်းဘောင်းဘီများရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။
Muy Buenos ဟုသူကပြောသည်
ထိုအပြာသို့မဟုတ်အဖြူဂျင်းဘောင်းဘီကိုအဘယ်သို့ရောနှောနိုင်သနည်းငါဆိုလိုတာကရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီ?! ပိုပြီးကြော့! ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
တီရှပ်တစ်ခု ??? ဒါဟာ fluo အစိမ်းရောင်ဖိနပ်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီ၊ အနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီ၊ အကျီအဖြူနှင့်အနက်ရောင်ဖိနပ်တို့ပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသလား။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
eu သည်ကျွန်ုပ် reception ည့်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်အဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီကို lilac ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အနက်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ချင်ပါသည် ????
ဒန်နီ, သင် chebere ဖြစ်လိမ့်မည်ပေမယ့်ငါကချောပန်းရောင်ပဝါ, ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိမ့်မယ်
အညိုရောင်ဖိနပ်နှင့်ပန်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီ comvina နှင့်အတူအဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်အတူဘောင်းဘီ
Andres ကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ပူပြင်းတဲ့ fluo အစိမ်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်သင့်ပြီးအဝါရောင် duckling ботинки၊
ဟိုင်း၊ ငါ့မှာမုန်ညင်းရှည်တစ်ထည်ရှိတယ်၊ အဲဒါကိုအဖြူရောင်ဘောင်းဘီနဲ့ပေါင်းလို့ရမလား။ နှင့်အဘယ်အရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုငါဝတ်ဆင်သင့်သလဲ နှင့်လည်စည်း?
NAVY BLUE DRESS SHIRT, CATERPILLAR SHOES, LIGHT COFFEE COLOR, ခါးပတ်နှင့်ခါးပတ်နှင့်အဖြူရောင်ဘောင်းဘီတိုပေါင်းစုံ၏အရောင်များကိုပေါင်းစပ်ပါသလော။
ငါအဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းစပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ တရားဝင်ပါတီပွဲမှာငါမလိုအပ်ပေမယ့်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။ S
ကျွန်ုပ်၏အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်ပန်းရောင်စနီကာများ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အရောင်ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်၌ဂျင်းဖြူဖြူရောင်ရှိသည့်မေးခွန်းနှင့်မီးခိုးရောင်အစင်းများဖြင့်သူတို့ကိုအနက်ရောင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဗင်နာနှင့်မည်သည့်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုကျွန်ုပ်ရလိုသည်ကိုသိလိုပါသလား။ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင်းပေါင်းစပ်နိုင်ပါ
Abner Elias Rodríguez Alvarez ဟုသူကပြောသည်
ငါ၌အဖြူရောင်ဘောင်းဘီနှင့်အဆင်ပြေမည့်မေးခွန်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အဖြူနှင့်အပြာဖိနပ်ရှိပြီးရှပ်အင်္ကျီနှစ်လုံး၊ အဖြူနှင့်စတုရန်းပြာရှိပြီးနောက်တစ်ခုမှာအဖြူရောင်ရှိသည်။
Abner Elias Rodríguez Alvarez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ ဘယ်လိုလဲ? ငါအဖြူရောင်ဘောင်းဘီရှိပြီးဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ ၀ တ်ချင်တယ်။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ!!!